Izindaba - Ngesikhathi soMkhosi Wasentwasahlobo, ngeke siyeke ukusebenza, sinakisise ukukhiqizwa kwemaski futhi sizame konke okusemandleni ethu ukukhulisa ukunikezwa.
Ngesikhathi soMkhosi Wasentwasahlobo, ngeke siyeke ukusebenza, sibhekisise ukukhiqizwa kwemaski futhi sizame konke okusemandleni ethu ukukhulisa ukunikezwa.
Ngenxa yokuqubuka kwenyumoniya ebangelwa ukutheleleka okusha kweCoronavirus, inani labantu abanaleli gciwane laqala ukusabalala lisuka ku-Han Wu. Ngenkathi ukuvikela ubhubhane oluphambili kanye nabasebenzi bezempilo bedonsa kanzima ukuze belaphe, ukusetshenziswa kwemishini yokuvikela yezokwelapha nakho kukhulu, okuhlanganisa nokusetshenziswa kwama-respirators.
Selokhu kwaqalwa kabusha ulayini wokukhiqiza ngobusuku bangaphambi koMkhosi Wasentwasahlobo, inkampani yethu isabele ngenkuthalo obizweni lukazwelonke, yacela abasebenzi ukuthi bangawuyeki ukukhiqiza futhi benze yonke imizamo yokwandisa ukunikezwa.
NgoJanuwari 26, inkampani yethu i-Shanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd. yaxoxwa yi-Xinhuanet.
·Le ndatshana ivela kuklayenti le-Xinhuanet.
Lona umugqa wokukhiqiza imaski we-Shanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd. othwetshulwe ngoJanuwari 26. Muva nje, i-Shanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd., etholakala esifundeni sase-Fengxian, e-Shanghai, ibimatasatasa. Abasebenzi bale nkampani basebenze isikhathi esengeziwe ukwenza imaski futhi bandise ukuhlinzekwa, ukuze banikeze isiqinisekiso sokuvimbela nokulawulwa kwenyumoniya entsha. Kuthwetshulwe intatheli yeXinhua News Agency uDing Ting
NgoJanuwari 26, abasebenzi baseShanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd. babebala imaski ekhiqiziwe. Muva nje, i-Shanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd., esesifundeni sase-Fengxian, e-Shanghai, ibimatasatasa. Abasebenzi bale nkampani basebenze isikhathi esengeziwe ukwenza imaski futhi bandise ukuhlinzekwa, ukuze banikeze isiqinisekiso sokuvimbela nokulawulwa kwenyumoniya entsha. Kuthwetshulwe intatheli yeXinhua News Agency uDing Ting
Ngomhla zingama-26 kuMasingana, abasebenzi baseShanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd. bafaka emabhokisini imaski ekhiqiziwe. Muva nje, i-Shanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd., esesifundeni sase-Fengxian, e-Shanghai, ibimatasatasa. Abasebenzi bale nkampani basebenze isikhathi esengeziwe ukwenza imaski futhi bandise ukuhlinzekwa, ukuze banikeze isiqinisekiso sokuvimbela nokulawulwa kwenyumoniya entsha. Kuthwetshulwe intatheli yeXinhua News Agency uDing Ting
Lesi sihloko sivela kuklayenti le-Xinhuanet.